Baafintii Beenowday Ee Yoonis Cali Nuur! - FOOLAAD MEDIA
Home » Aragtida Dadweynaha » Baafintii Beenowday Ee Yoonis Cali Nuur!
Baafintii Beenowday Ee Yoonis Cali Nuur!
Yoonis Cali Nuur, Allahaa u naxariistee, qofka doonaya in uu qoraal, warbixin iyo odhaah ba kaga waramo taariikhdiisii, waxaan qabaa inaanu wada odhan karin, hase ahaatee, waxa jira dhacdooyin qofiba meel iska taago oo ku taxan noloshiisii.
Sannadkii 1984-kii ayuu ku biiray idaacadda BBC, sida uu iiga waramay Maxamuud Cabdi Cali (Ducaale) oo ka mid ah ruugcaddaaga saxaafadda Soomaalida ee ay muddada dheer asxaabta iyo shaqo-wadaagta ahaayeen marxuumka. Sannadkii 1989-kii ayuu marxuum Yoonis Cali Nuur ka soo ambabaxay magaalada London, si uu xog iyo wararba uga tebiyo wixii ka socday wakhtigaasi Somaliland ee dagaallo iyo dhibaato ba lahaa. Markii uu yimi ee uu deegaanno badan maray, ayuu tegay dalka Itoobiya oo inta badan fadhiisin u ahayd ‘Dhaqdhaqaaqii SNM’. Muddo ayaa war laga waayay, dabadeed waxa la galay raadintiisa. Iyadoo cid waliba dhegtu taagan tahay, gaar ahaan BBC iyo dadkii ay shaqo-wadaagta ahaayeen badankooda, ayaa weriyihii BBC uga soo waramayay Muqdisho uu diray war sheegaya ‘In Yoonis Cali Nuur dhintay, ka dib markii uu gaadhi uu saarnaa ay miino la kacday!’. Weriyuhu wuxuu xiganayay, sida uu ii sheegay M. C. C Ducaale, gaadhi ay miino kula kacday oo uu saarnaa nin magaciisa la odhan jiray Yoonis Cali oo ka mid ahaa saraakiishii Ururkii SNM. Weriyuhu wuxuu u qaatay in Yooniska dhintay uu yahay Yoonis Cali Nuur! Warkii baa gaadhay Landhan iyo asxaabtii ay shaqo-wadaagta ahaayeen, walow qaarkood ka war qabeen in aanu warkaasi jirin.
Ku-simihii madaxa BBC oo gabadh ahayd, ayaa go’aansatay in la baafiyo, in yar ka dibna waxa idaacadda laga sii daayay warka geerida Yoonis. Wakhtiga warka iyo baafintuba baxayaan waxa uu Yoonis ku sugnaa gudaha Somaliland. Wuxuu idaacadda ka maqlay warka tacsidiisa, dabadeed waxa uu tegay dhinaca Itoobiya – Waxaanu ka hadlay Idaacaddii SNM lahayd, isagoo dulucdiisu ahayd in uu sheego in aanu dhiman ee uu nool yahay. Ilaahay ha u naxariistee, xalay (20 July 2018), ayuu ku geeriyooday magaalada Landhan ee Ingiriiska.